च्याटका क्रममा इ’मोजी किन प्रयोग गर्छन् ? यस्तो छ कारण ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकच्याटका क्रममा इ’मोजी किन प्रयोग गर्छन् ? यस्तो छ कारण !
च्याटका क्रममा इ’मोजी किन प्रयोग गर्छन् ? यस्तो छ कारण !
काठमाडौं । यूग परिवर्तनसँगै मानिसहको माया झ’ल्काउने अभिव्यक्ति पनि फरक ढंगले प्रस्तुत भइरहेको आजभोली देखिने गरको छ । फेसबूक मेसेन्जर र ह्वा’ट्सयाप जस्ता प्ल्याटफर्म आएपछि मानिसहरू आफ्नो मनको कुरा सहजै बताउन थालेका छन् ।
तर च्याटका क्रममा कतिपय अवस्थामा टेक्स्टमा लुकेको भावलाई बुझ्न अलि मुश्किल पर्छ ।तर यहाँ हामी च्याटको टेक्स्टहरूमा लुकेको भाव कसरी थाहा पाउने भनी सिकाउँछौं ।तपाईंलाई कुनै युवतीले मन पराइन् भने च्याटमा ऊ सधैं तपाईंको निकनेम लेखेर कुरा गर्छिन् ।
तपाईंलाई मुटुको भित्री तहबाट उनले मन पराउँछिन् भन्ने संकेत यसबाट पाउनुहुनेछ ।औपचारिक कुराकानी वा ना’तेदारसँगको गफगाफमा मानिसहरू इमोजी त्यति प्रयोग गर्दैनन् । तर आफ्नो क्र’शसँग कुरा गर्दा मानिसहरू हार्ट इ’मोजीको उपयोग खुबै गर्छन् ।मन पराएको मानिसले तपाईंको हालखबर सोधेर दिनभरिको योजनाका बारेमा पनि प्रश्न गर्छन् ।
तपाईंलाई भेट्न वा डे’टिङ गर्नका लागि अनेक किसिमका ब’हाना उनीहरूले बनाउँछन् । त्यस्ता संकेतहरूलाई तपाईं आफैंले चिन्नुपर्ने हुन्छ ।तपाईंले फेसबूकमा के पोस्ट गर्नुभयो रु प्रोफाइल पिक्चर कहिले चेन्ज गर्नुभयो रु यस्ता कुरा जान्न मन पराएको मानिसलाई खुबै चासो हुन्छ ।
अनि नयाँ प्रोफाइल पि’क्चर र पोस्टमा उनीहरूले अवश्यै कमेन्ट गर्छन् ।तपाईंलाई मन पराउने मानिसले पुरानो कथा वा बाल्यकालको तस्वीर पनि शेयर गर्छ । जीवनसाथी बनाउने सोच भएकाहरूसँग मात्र यस्ता कुराहरू शेयर गरिन्छ ।